Etu aga - esi kwalite saịtị WordPress gị
Wenezdee, Jenụwarị 30, 2019 Wednesday, February 6, 2019 Douglas Karr
Anyị edeela, n'ụzọ dị ukwuu, mmetụta nke ọsọ na omume nke ndị ọrụ gị. Na, n'ezie, ọ bụrụ na enwere mmetụta na omume onye ọrụ, enwere mmetụta na njikarịcha njikwa nyocha. Otutu ndi mmadu amaghi ihe ọtụtụ ihe etinye aka na usoro dị mfe nke ịpị na ibe weebụ ma nwee peeji ahụ ibu maka gị.
Ugbu a ọkara nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na saịtị niile na-agagharị agagharị, ọ dịkwa mkpa ịnwe mpempe akwụkwọ dị nfe, peeji nke ngwa ngwa ka ndị ọrụ gị ghara ibiaghachi. Ọ bụ nnukwu nsogbu nke Google mepụtara Peeji ngwangwa osooso (AMP) iji dozie nsogbu ahụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye mbipụta akwụkwọ, a ga m agba gị ume ịhazi ma gosipụta ụdị AMP nke ibe gị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ WordPress, mgbe ahụ ị nwere ike ịnwe nsogbu ya kachasị emetụta, nke bụ nhazi ngwa ngwa ya. Nhazi ngwa ngwa nke WordPress na-aghọ ezigbo nsogbu mgbe ọrụ gị metụtara saịtị gị na-adịghị arụ ọrụ.
101 Basics Blogging
Nke a kediegwu infographic si 101 Basics Blogging na-ejegharị site na usoro ezi uche dị na ya iji meziwanye arụmọrụ nke WordPress.
Edozi nsogbu nke ahụ nwere ike ịbelata saịtị gị. Buru n'uche na saịtị gị nwere ike ịgba ọsọ nke ọma n'oge adịghị nwayọ nwayọ, wee bia na-akwụsị mgbe ị chọrọ ka ọ rụọ ọrụ kacha mma - yana ọtụtụ ndị ọbịa n'otu oge.
Wepu plugins na-enweghị isi na-akpata oke nchegbu na nchekwa data gị ma ọ bụ na-ebubata ọtụtụ ihe na ibe gị. Nlekọta ngwaọrụ enweghị mmetụta dị mkpa, yabụ echegbula ha.
Na-ebuli nchekwa data gị maka ngwa ngwa gbara ajụjụ. Ọ bụrụ na nke ahụ dị gị ka French, enweghị nchekasị. Ebe nchekwa data na-arụ ọrụ ọsọ ọsọ karị mgbe edepụtara data ahụ nke ọma n'ime ha. Ọtụtụ ndị agha anaghị ebuli nchekwa data gị na akpaghị aka, mana enwere ọtụtụ plugins na-eme. Naanị jide n'aka na ndabere data gị mbụ!
Netwọk Nzipu Afọ ngwa ngwa nyefee ndị na - agụ akwụkwọ gị ọdịnaya static gị na mpaghara. Anyị edeela nnukwu nnyocha, Kedu ihe bụ CDN? iji nyere gị aka ịghọta.
Okwu Gbasara Oyuyo site na mbenata gị image nha enweghị na-achụ àjà mma. Anyị na-eji Kraken anyị na saịtị na ọ meela ihe siri ike. I nwekwara ike umengwụ ibu oyiyi n'ihi na ha na-egosi n'ezie mgbe onye ọrụ pịgharịa gaa na ha n'ime ele.
Caching nyere anyị usu, Flywheel. Ọ bụrụ na onye na-elekọta gị anaghị enye mkpuchi, enwere ụfọdụ plugins dị n'ebe ahụ ga - enyere gị aka. Anyị na-akwado WP Kaiser maka ndị chọrọ izere tweaking niile nke plugins ndị ọzọ.
Social Media ringkekọrịta mkpọchi bụ ihe dị mkpa maka saịtị ọ bụla, mana saịtị mmekọrịta agaghị arụkọ ọrụ ọnụ ma rụọ ọrụ jọgburu onwe ya n'ịhụ na bọtịnụ ha adọtaghị saịtị iji kwụsị ọrụ. Anyị hụrụ n'ezie nhazi niile nke ahụ n'anya Ekekọrịta na-enye - ma ị nwere ike ọbụna nyochaa saịtị gị site na iji nyiwe ha.
You maara ma saịtị gị ọ dị kpam kpam? Aga m agba gị ume ka ị kwado ma hazie Jetpack's ngwa mgbakwunye ka i wee nwee ike Nyochaa oge saịtị WordPress gị. Ọ bụ ọrụ na - akwụghị ụgwọ ma dị mma ịmara ugboro ole saịtị gị na - enwe nsogbu. Lee infographic zuru oke!
Etu esi mejuputa nweta nnweta Email maka Teknụzụ Enyemaka
UX Design na SEO: Etu otu ihe nrụọrụ weebụ abụọ a nwere ike isi rụọ ọrụ ọnụ maka uru gị
Mee 28, 2016 na 8: 36 PM
Kedu ihe ị na-eji na saịtị gị iji nweta AMP? You jiri ngwa mgbakwunye (ọ bụrụ otu, olee nke), chọta ndebiri nke jikọtara ya? Ma ọ bụ hardcode ya?
Mee 29, 2016 na 12: 59 PM
Iji Automattic si Google AMP ngwa mgbakwunye.
Jun 5, 2016 na 3:01 AM
Automattic si? Ga-ezu.
Site na ngalaba "gaa na isi mmalite" n'ọtụtụ, ọtụtụ ọkwa.
Jun 5, 2016 na 5:00 AM
Melite. O were 22 sekọnd ala download na melite. Nkeji 2 nke m na - elegharị anya ma na - aga, “chere, ọ bụ ya?”
Okwu ọ bụla na mgbe ibe, edemede, na ebe nchekwa ihe na-aga inwe otu ịhụnanya?
Jul 14, 2016 na 11: 07 AM
Ezigbo akụkọ. Achọtara m ọtụtụ isi karịa ngwa ngwa njikarịcha ndị ọzọ.
M soro ụfọdụ isi gị ugbu a ọsọ ọsọ peeji m dị n'okpuru 700ms. tupu ọ bụ 2.10s. Daalụ maka isiokwu a dị egwu, jide n'aka na m ga-ekekọrịta nke a na ndị enyi m blogger.
Ọkt 12, 2016 na 2:29 PM
nnọọ uru na-enye aka post. Achọtara m ebe m na-edebe akwụkwọ ebe m na-egbu oge… isiokwu a nyeere m aka nke ukwuu ma achọta m ụzọ ọhụrụ ole na ole maka ịkọwa saịtị m.